စပိန်မှ '' ပို '' Translate ရန်ကဘယ်လို
'' နောက်ထပ် '' ဘာသာပြန်ဆို
'' Mas '' အများအားဖြင့်သုံးနိုငျ
အင်ျဂလိ "ကိုပို" များသောအားဖြင့်မခွဲခြားဘဲကတစ်ဦးအဖြစ်လည်ပတ်နေသည်ရှိမရှိ၏စပိန်စရဖအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ် adverb , နာမဝိသေသန , ဒါမှမဟုတ် နာမ်စား ။
သူတို့၏အမျိုးအစီဥပမာသုံးခုကို မိန့်ခွန်း၏အစိတ်အပိုင်း : အသီးသီးသည်ဤစာကြောင်းများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်,
hay စရဖဂီ en Que en Toda la Tierra ယူရိုပါလိဂ်, una luna က de ဂျူပီတာ။ (ကမ္ဘာမြေ၌ရှိသမျှအပေါ်ထက်ယူရိုပါလိဂ်အပေါ်ပိုပြီးရေ, ဂျူပီတာတစ်လရှိပါသည်။ )
hay စရဖ felicidad en Dar Que en recibir ။ (အသေးစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံယူခြင်းထက်ပေးကမ်းခြင်း၌ရှိပါသည်။ )
Debes leer စရဖ libros ။ (သင်ကပိုစာအုပ်တွေကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။ )
Este စမ်းသပ် es el စရဖdifícilက de todo los tiempos ။ (ဤစမ်းသပ်မှုအားလုံးအချိန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါသည်။ )
Nuestra cultura se ဟက်တာ vuelto စရဖ comercializada ။ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုမိုများသည့်စီးပွားရေးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ )
Despuésက de leer esto, seleccionarásစရဖ cuidadosamente tu ropa ။ (ဒီစာဖတျပွီးနောကျ, သင်ပိုမိုဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့အဝတ်အစားထွက်ကောက်ကြလိမ့်မည်။ )
¿Quiénes compran စရဖ: hombres ဏ mujeres? (သူကားအဘယ်သူပိုပြီးဝယ်ယူ: ယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေ?)
Quiero un poco စရဖ။ (ကျနော်အနည်းငယ်ပိုချင်။ )
အဘယ်သူမျှမမြက်ပင် mucho စရဖ Que hacer ။ (လုပ်ဖို့အများကြီးပိုမရှိပါ။ )
စပိန်ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုအခါ, "+ နာမဝိသေသနစရဖ" သို့မဟုတ် "+ adverb စရဖ" မကြာခဏ "-er" တွင်အဆုံးသတ်မည့်အစားသုံးပြီးစကားလုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုကြောင်း "ပို။ " မှတ်ချက် ဥပမာအားဖြင့်, စရဖ Facility "ပိုမိုလွယ်ကူ၏။ "
'' သန်းပိုမို '' ဘာသာပြန်ဆို
"ထက်ပိုမို" နှစ်ခုလုပ်ရပ်များအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအခါကပုံမှန်အားစရဖ Que အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
Nadie te Ama စရဖ Que yo ။ (ဘယ်သူမှပိုပြီးငါပွုထက်သင်နှစ်သက်တော်မူ၏။ )
လာ့စ်ဗီး tortugas Marina comen စရဖ Que Las terrestres ။ (အဏ္ဏဝါလိပ်မြေပေါ်တွင်မြားထက်ပိုစားပါ။ )
una acción habla စရဖ Que Mil palabras ။ (တစ်ဦးအရေးယူ 1,000 ကျော်စကားလုံးများကိုပြော၏။ )
ကအရေအတွက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောအခါစရဖက de ဖြစ်လာသို့သျော "ထက်ပိုပြီး":
စရဖက de cien perros murieron por la enfermedad ။ (100 ကျော်ခွေးနာမကျန်းကနေသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ )
Detienen တစ် sujeto con စရဖက de un kilogramo က de marihuana ။ (သူတို့ကဆေးခြောက်တစ်ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုအတူသံသယရှိသူကိုဖမ်းဆီး။ )
si, စရဖက de dos mentiras အယ်လ် DIA dices un problema tienes ။ (သင်နှစ်ယောက်ထက်ပိုမုသာစကားတစျနေ့ကိုပြောပြလျှင်သင်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်။ )
'' ဒီပို '' ဘာသာပြန်ဆို
အဆိုပါအဖြစ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများဖော်ပြ၏ပုံမှန်အတိုင်းလမ်း " သာ. " ဘာသာရပ် စပိန်အတွက်ဝါကျ၏ cuanto စရဖဖြစ်ပါသည်:
Cuantos စရဖ, mejor ။ (ပိုပိုကောင်း။ )
Cuanto စရဖ Tien un hombre, စရဖ quiere ။ (ပိုနေတဲ့လူကိုရှိပါတယ်, ပိုသူလိုသည်။ )
Cuanto စရဖcomía, စရဖcrecía။ (ပိုမိုငါတယ်ပိုကြီးစားရကြ၏။ )
Cuanto စရဖ tenga en consideración Las experiencias y ကထင်မြင်ချက် personales del compañero, စရဖ va တစ် aprender ။ (ထိုအတွေ့အကြုံများကိုနှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်များများအတွက်သင်ရှိသည်ပိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ပိုငျသညျကိုသင်ယူကြလိမ့်မည်။ )
" သာ. " ကိုမကြာခဏတစ်ဦးမိတ္တူပွားဆောက်လုပ်ရေး, ဥပမာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုသည်အင်္ဂလိပ်, "ဟု The ပိုပြီးသင်ပိုပြီးသင်လုပ်နိုင်ငါသိ၏။ " စပိန်အတွက်, ဒီပုံတူကိုအသုံးပြုမပေးပါ။ Cuanto စရဖ Sepa, စရဖ se puede hacer: ရိုးရှင်းစွာဝါကျ၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်စရဖကိုအသုံးပြုပါ။
အဆိုပါဖြစ်စေ subjunctive သို့မဟုတ် ညွှန်ပြစိတ်ဓါတ်များ cuanto စရဖပြီးနောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ခံစားချက်၏ပုံမှန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါတို့သည်ပြဖြစ်နိုင်ခြေရန်, အမှန်တကယ်ဘာဖို့ subjunctive ရည်ညွှန်းအသုံးပြုသည်။
တချို့ကစပီ cuanto များအတွက် Contra သို့မဟုတ် entre mientras, အစားထိုး။ ထိုသို့သောအသုံးပြုမှုအရေးအသားထက်မိန့်ခွန်းတွင်ပိုမိုဘုံသည်နှင့်အချို့သောဒေသများတွင်အလွတ်သဘောနဲ့အရည်အသွေးမမီတဲ့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
Beginners အက်ဆင်း und Trinken များအတွက်ဂျာမန်
'' Estar '' Muerto '' နှင့်အတူအသုံးပြု
ပြင်သစ်က 'ရေဒီယိုကိုနားထောင်' 'Écouter la ရေဒီယို' 'ဖြစ်ပါသည်
( 'စာလုံးပေါင်းရန်') ပြင်သစ်ပင်မ-ပြောင်းခြင်းကြိယာ '' Épeler '' Conjugate လုပ်နည်း
'' Gustar 'ဖို့အလားတူကြိယာ
'' Estar '' ပိုအသုံးပြုခြင်း
အစိုင်အခဲရွှေ Spotlight ကို: ငါပြန်လှည့်သင့်အ Want
မာ့ခ် Chagall, Folklore ၏အဆိုတော်နှင့်အိပ်မက်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးမဲပေးခွင့်ရှိရေး Timeline ကို
ကျောင်းများ ARS Antiqua နှင့် ARS Nova အကြားခြားနားချက်
စပိန်အတွက်အနာဂတ် perfect tense
အဆိုပါ Beatles သီချင်းများ: "ဟေ့ယုဒ"
ကလေး Serial Killer နှင့်ကလေးဗလက္ Westley Allen က Dodd
10 အရေးကြီး Lab မှလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများ
ညာဘက် RITES, Wright နှင့်ရေးထား
Reflex ကြိယာနှင့် Pronoun
ရှုပ်ထွေးပြင်သစ် Pairs: Bien vs ဘွန်
မူလစာမျက်နှာမှာကလေးများမိုးလေဝသစခန်း Make လုပ်နည်း
ကောလိပ်အတွက်သူငယ်ချင်းများ Make7နည်းလမ်းများ